Ny tontolon’ny bilaogy Saodiana · Global Voices teny Malagasy
Ny tontolon'ny bilaogy Saodiana
Voadika ny 15 Novambra 2018 4:47 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Novambra 2007)
Somary mangina kely tamin'ity herinandro ity tao amin'ny tontolon'ny blaogy Saodiana. Angamba nanapa-kevitra nanararaotra ny toetr'andro mahafinaritra ao Arabia Saodita tato ho ato ny ankamaroan'ny bilaogera mba hitsangatsanganana any an-tany efitra na handehanana eny amoron-dranomasina. Na dia izany aza, nisy ihany ny lahatsoratra maromaro, ka andeha hijery izay mahaliana.
Nahitana fihaonana roa teo amin'ireo bilaogera Saodiana tamin'ity herinandro ity. Ny voalohany dia tao Jeddah, izay nahitàna bilaogera valo nivory sady nisotrosotro kafe, ary niresaka momba ny Linux, ny fiainana eny amin'ny oniversite, ary ny bilaogy. Fouad al-Farhan manana tatitra amin'ny antsipiriany avy amin'ny fihaonana. Fihaonana madinika iray hafa no natao tao Riyadh, miaraka amin'ny lohahevitra “vehivavy ihany”.
Iray amin'ireo lohahevitra mafana ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Saodiana tamin'ity herinandro ity ny momba ny fiara, na izany aza, tsy nisy vehivavy niditra tamin'ity fotoana ity. Nanoratra momba ny loza eny an-dalana i Trilancer, ary mihevitra fa “mampalahelo fa lasa anton'ny loza marobe ny lozam-pifamoivoizana atsy ho atsy.” Nomeny tsiny ny arabe simba, ary koa ny vahoaka izy, “hatramin'ny taona maro, nampiseho ny fampiharana ny lalàna momba ny fifamoivoizana fa manenjika olona foana ny polisy misahana ny fifamoivoizana”. Saika tao anatin'ny loza hafa i Dotsson. Mandritra izany fotoana izany, TyT naka fotoana hanazavana ny tranga iray nantsoiny hoe Fanafihana ny Camry Boys.. “Tena manorisory eny an-dàlambe ireo ankizy ireo, mitondra fiara mirimorimo tsy latsaky ny 150km (isan'ora),” hoy izy nanoratra.
Eo ambanin'ny lohateny, “Tadidinao ve izy?” Abu Joori manoratra momba ny herintaona taorian'ny fahafatesana hafahafa nahazo an'i Yasser Arafat fa izy no solontena tsara indrindra ho an'ny Palestiniana. Mivavaka ho an'ny vahoaka Palestiniana ihany koa i Abu Joori mba ho tafaray, ary hahazo ny zon'izy ireo amin'ny alàlan'ny fananana fanjakana mahaleotena ao amin'ny tany Palestiniana. Fanontaniana marobe no tonga avy amin'i Meesho Meesho, izay gaga nahita ny vaovao momba ny fananganana fiangonana voalohany ao Qatar, ary manontany tena raha mila manao izany koa isika mba hampifaliana fotsiny ny Amerikana sy Eoropeana. “Sa fahalemena ve izany? Fahalemena eo amin'ny fivavahantsika, fahalemena eo amin'ny toetrantsika?” hoy izy manontany.
Ankehitriny, andeha hojerentsika ny safidintsika haingana sy kisendrasera ho an'ity herinandro ity: Saudi Eve miresaka momba ny maha-junkie (mpankafy vaovao tafahoatra) vaovao azy. Tsy tian'i Trilancer ny famoronana rafitra lalao amin'ny finday DS Nintendo, noho izany dia niasa tamin'ny endrika vaovao izy. Ary manantena fiovana sasantsasany ao amin'ny kabinetra kosa i Fouad al-Farhan, nanonona ministra telo izay heveriny fa hosoloina. Milaza izy raha diso ny fanantenany, dia hanakatona ny bilaoginy.
Farany, ity sombina filôzôfia avy amin'ny ubergirl87, izay te-ho tsy mitonona anarana, fa tsy miala. “Rehefa tsy mitonona anarana aho, dia mety ho tsinotsinona ho an'iza na iza (…) Rehefa miala aho, dia fantatry ny olona hoe iza aho, saingy tsy mifandray amiko, ary tsy fantatro koa izy ireo. Tahaka ny hafahafa. Raha toa kosa ka tsy mitonona anarana ianao, dia tsy irery ianao”, hoy izy nanoratra.
12 ora izayMaraoka